Fikarohana momba ny firaisana Mpianatra Libaney manao famonoan-tena any Kalifornia ary reincarnates any Libanona: Ny tranga taloha momba ny fiainana Rabih Assaf | Wael Kiwan - Fikarohana Reincarnation
Researched:: Erlendur Harraldsson, PhD
From: Nahita hazavana aho ary tonga eto, nosoratan'i Erlendur Harraldson, PhD sy James G. Matlock, PhD
Ny Fiainana sy ny fahafatesan'i Rabih Assaf
Rabih Assaf dia teraka tamin'ny Aogositra 12, 1964. Niara-nipetraka tamin'ny reniny izy, izay no anarany hoe Munira, tao amin'ny tranobe misy rihana efatra sy tany Beirut, Libanona, tao amin'ny tanàna Jal al Bahr, izay akaikin'ny Ranomasina Mediterane. Nisy trano moske iray teo akaiky eo, nomena anarana hoe Allah Wa Akbar.
Nipetraka teo amin'ny gorodona voalohany izy ireo, izay nahazo lavarangana teo anoloan'izy ireo izay teo an-tampon'ilay arabe ihany. I Rabih dia mitsambikina matetika amin'ny lavarangana mankany amin'ny lampivato hidirana amin'ny trano. Tao ambadiky ny tranon'izy ireo dia trano nisy tafo mena.
Rehefa nihamatotra izy dia nanondrana volombava i Rabih nidera ny volony mainty. Rehefa 21 taona izy dia nifindra tany South Pasadena, Kalifornia, i Rabih, izay nananan'ny havany. Ny tanjon'io famindrana io dia ny handalina ny injeniera amin'ny oniversite amerikana. Nahavita fianarana roa taona izy, nefa tsy lany vola intsony. Te hiverina any Beirut i Rabih saingy tsy afaka noho ny antony roa. Ny iray dia ny ady an-trano nitranga tany. Faharoa, tsy manam-bola firy izy mba hivezivezy any, ary indrisy, fa nanana ny vola entina hanohanana ny tenany any California izy.
Rary ketraka i Rabih ary nanandrana namono tena tamin'ny fihinanana fanafody tafahoatra, fa nentina tany amin'ny hopitaly izy ary tafavoaka velona. Ny fianakaviany tao Pasadena Atsimo dia nanandrana niambina azy mba hanakanana andrana hafa, fa tamin'ny Janoary 9, 1988, XNUMX, namono tena i Rabih tamin'ny nanantonana ny tenany tao amin'ny garazy fianakaviana.
Rabih Reincarnates any Libanona
Wael Kiwan dia teraka tao 1988 tao amin'ny tanàna Batir, izay any an-tendrombohitra Libanona 70 kilometatra na 44 kilaometatra atsinanan'i Beirut. Ny daty nahaterahany dia tsy voarakitra an-tsoratra ao amin'ny tatitra momba ny tranga izay navoakan'ny Dr Haraldsson, saingy voalaza fa hita fa teraka i herintaona herintaona nahaterahan'i Rabih Assaf.
Rehefa feno efa-taona i Wael dia nilaza fa Rabihà no anarany. Nilaza izy fa lehibe izy taloha ary manana ray aman-dreny hafa any Beirut. Tiany ho fantatra ny toerana misy azy ireo. Nilaza izy fa nipetraka tao amin'ny faritra Jal al Bahr any Beirut teo amoron-dranomasina ary izy no nipetraka tamin'ny fivavahan'i Allah Wa Akbar.
Wael dia niresaka sambo. Nisintona ny kodiaran'ilay sambo tamin'ny taratasy izy ary nilaza hoe, "Nitsangana aho taloha", ary avy eo dia namindra ny tanany tamin'ny fihetsiketsehana izy ary nampiseho ny fomba hitondrany ny sambo.
Andao hamintina ireo fanambarana nataon'i Wael, izay marina amin'ny fiainan'i Rabih Assaf:
“Rabihiko no anarako. Lehibe aho. ”
“Manan-dray aho. Tsy eto izy ireo, ao Beirut izy ireo. ”
"Ny tranoko dia ao Beirut akaikin'ny ranomasina."
"Ny tranoko dia ao amin'ny Jal al Bahr."
"Ny tranoko dia eo akaikin'ny tranon'i Allah Wa Akbar."
"Misy trano misy tafo biriky mena."
"Izahay dia manana lavarangana."
"Nitsambikina avy teny amin'ny lavarangana mankany amin'ny arabe aho."
"Avy any amin'ny tranoko mankany amin'ny ranomasina aho."
"Matetika aho no tao anaty sambo mandeha amoron-dranomasina."
“Nanana trano roa aho, ny iray tao Beirut, ary ny nandehanako tamin'ny fiaramanidina iray.”
Fanadihadiana ireo fahatsiarovana ny fiainana taloha tao Wael
Mandehandeha any Beirut ny rain'i Wael tsindraindray. Raha niverina izy dia nanontany i Wael raha nahita ny tranony. Rehefa namaly ny rainy fa tsy manana izy dia tezitra i Wael ka nilaza hoe: "Raha hitanao izany dia aza ambarao fa maty i Rabih, fa hitomany izy ireo."
Tamin'ny fiezahana hahatakatra hoe iza i Wael no tao an-toeran'izy ireo taloha, dia nivory niaraka tamin'i Wael ny fianakaviana ary nanao lisitra anarana iombonana na anarana farany tao Beirut izy. Nolaviny ny anarana rehetra mandra-pahatongany tany "Assaf," tamin'izay dia nilaza i Wael, "Eny", izany no anaran'ny fianakaviany taloha. Noho izany, ny anaran'ny fiainana taloha dia Rabih Assaf.
Ny rain'i Wael dia nanana namana tany Beirut, Sami Zhairi, izay nanaiky hanontany zazalahy iray izay nofaritan'i Wael. Sami nahalala momba an'i Rabih Assaf izay nipetraka tao amin'ny fizarana Jal al Bahr any Beirut, izay manana ny fiainany izay toa mifanaraka amin'ny fanambarana nataon'i Wael.
Wael dia nahita ny tranony taloha
Iray taona teo ho eo taorian'ny nanaovany ny fanambarany voalohany momba ny fisiany teo aloha, dia nentin'ny rain'i Wael tany Beirut izy. Niaraka tamin'i Sami izy ireo indray mandeha. Rehefa niditra tao amin'ny tanàna Jal al Bahr i Wael dia nihazakazaka nialoha izy ary namantatra ny trano niainany taloha niaraka tamin'ny balkon kely teny ambony arabe.
Nandondona teo am-baravaran'ny trano rihana voalohany izy ireo ary navelan'i Raja Assaf, izay rahalahin'i Rabih. Munira, renin'i Rabih, dia tsy tao an-trano tamin'izany fotoana izany. Wael dia nahita sary teo amin'ny rindrina ary nilaza hoe, "Ity ny sariko." Sarin'i Rabih Assaf izany.
Avy eo Raja dia namoaka rakitsary sary hahitana raha afaka mamantatra olona ao amin'ny fianakaviana i Wael. Izy dia afaka nahafantatra ny dadan'i Rabih, ny rahavaviny ary ny nenitoany. Nanontany an'i Raja i Wael hoe inona no nanjo ilay trano misy tafo mena? Hita fa noravana ity tranobe ity taorian'ny nahafatesan'i Rabih.
Taty aoriana, rehefa nanontaniana i Munira izay nahatonga azy hino fa i Wael dia teraka indray ny zanany lahy maty dia nitantara ny fahalalany ilay tranobe misy ny tafo mena izy fa nandresy lahatra azy mihoatra noho ny zava-drehetra, satria nitombo i Rabih raha nahita ny tranobe avy ao ambadiky ny efitranony. Ahoana no nahalalan'i Wael momba ny rafitra iray tsy teo intsony?
Nanamafy ihany koa i Munira fa hitsambikina matetika amin'ny lavarangana i Rabih mba hidirana amin'ny arabe fa tsy handalo eo anoloan'ny varavaran'ny trano misy azy ireo. Nohamafisina ihany koa fa ny moske Allah Wa Akbar dia hita eo amin'ny 100 metatra miala ny trano fonenan'i Munira.
Fahatsiarovana ny vaovao momba ny famonoana ny fiainana taloha tao Wael?
Ny tsy fahombiazan'ny raharaha reincarnation amin'izao dia tsy nilaza mihitsy i Wael fa namono tena izy. Fa kosa nilaza imbetsaka izy fa rehefa hilentika ny masoandro, dia nahita andian'olona maromaro nanatona azy izy ary nitifitra azy ireo, avy eo dia nokapohiny ary nokapohiny mandra-pahatsany tsy nahatsapa na inona na inona. Manontany tena ny sasany raha toa ka nitondra fahafaham-baraka sy mahamenatra an'i Wael ny famonoan-tena, noho izany ny fanahin'i Rabih | Wael dia namorona ity tantara maty nahafatesana ity mba hampihenana ny fahatsiarovan-tena maharary azy amin'ny fahaketrahana amin'ny fiainany.
Reincarnation iray manambara nofy
Nizara ny renin'i Wael fa nanonofy izy herinandro talohan'ny nahaterahany, izay nahitany zazalahy lehibe iray izay nanana volombava, volo mainty ary lobaka misokatra. Reraka ny zazalahy, ary koa miaina haingana ary sahirana. Taty aoriana, rehefa voavaha ity raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ity dia nanamarika ny renin'i Wael fa nitovy tamin'i Rabih ilay lehilahy tamin'ny nofiny. Ny fahasahiranan'ilay zazalahy amin'ny fifohana rivotra dia mety misy ifandraisany amin'ny famonoan-tena amin'ny fihantonana.
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana: Na dia maty tany California aza i Rabih dia nahavita nitombo indray tany Libanona izy akaikin'ny trano niainany taloha. Ity hetsika ity dia mampiseho amin'ny fomba feno ny drafitry ny fanahy ho amin'ny fahatongavana ho tonga nofo. Tamin'ny alàlan'ny fananganana indray, i Wael dia nihaona tamin'ny reniny sy ny rahalahiny taloha.
Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny trangan'aretina ao amin'ny vatana: Toa niseho tamin'i nofinofy ny fanahin'i Rabihà, nambarany fa teraka ho zanany izy.
Mamono Tena: Namono tena i Rabih, fa teraka indray i Wael
Loharano: Haraldsson, Erlendur ary Matlock, James: Nahita jiro sy tonga teto aho, Boky Fotsy fotsy, 2016, pejy 57-62